घरमा राख्नुहोस् यी ६ बस्तु, धनको अभाव कहिल्यै खड्किदैन – Khabar Silo
घरमा राख्नुहोस् यी ६ बस्तु, धनको अभाव कहिल्यै खड्किदैन
Posted on March 5, 2021 Author khabar silo Comment(0)
काठमाडौँ । कहीलेकाही हामीले जति मेहनत गरेपछि पैसाको अभाव हुने गर्दछ। तन, मन र बचन लगाएर काम गर्दा पनि पैसाको अभाव खड्कियो भने तपाईमा वास्तु दोषको प्रभाव परेको हुन सक्छ।
त्यसैले हामीले घरमा राखिने केही व्यक्तिमा थोरै कुरा ध्यान दिदा बास्तु दोष हट्ने सम्भावना रहन्छ। आज हामी तपाईलाई वास्तुदोष हटाएर घरमा पैसाको अभाव हुन नदिने केही उपायका बारेमा जानकारी दिदै छौँ।
घरमा राख्नुस् यी ६ कुरा
१. घरमा माटोको घडा राख्नुस् । यसले घरमा पैदा गर्ने सकारात्मक उर्जाले धनको अभाव हुन दिँदैन । तर घडामा सँधै सफा पानी भरेर राख्नुस्।
२. घरको दक्षिणपश्चिम दिशामा पञ्चमुखी हनुमानको प्रतिमा वा तस्विर लगाउनुस् । यसको नित्य पुरा गर्दा घरमा पैसाको अभाव हुँदैन।
३. घरमा वास्तु दोष हुने भएका कारण धनको अभाव हुने वास्तु शास्त्रको भनाइ छ । वास्तु दोष हटाउनका लागि घरमा वास्तु भगवानको प्रतिमा राख्नु राम्रो मानिन्छ। यसो गर्दा धनको अभाव दुर हुन्छ।
४. घरको मुख्य ढोकामा लक्ष्मी र कुवेरको मुर्ती वा स्वस्तिकको चिन्ह राख्नु शुभ मानिन्छ। यो चिन्हले घरमा अभाव हुन दिदैन।
५. घरका अधिकांश सदस्यहरुले धेरै समय विताउने कोठा वा स्थानमा चाँदी, पित्तल वा तामाको पिरामिड राख्नुस्। यसले घरमा धनको अभाव हुन दिदैन।
६. वास्तु शास्त्रमा घरमा शुभ उर्जा पैदा गर्नका लागि धातुले बनेको कछुवा वा माछा राख्नु राम्रो मानिन्छ। यसले घरमा आर्थिक अभाब हुन दिदैन।
नेपालमै विवाह नगर्नेलाई सरकारले अविवाहित भत्ता दिने
काठमाडौं । दिपायल सिलगढी नगरपालि डोटीले अविवाहित भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । पचास वर्षसम्म बिहे नगरी एक्लै जीवन बिताइरहेका नगर भित्रका महिलालाई नगरपालिकाले भत्ता दिन लागेको छ । नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६, ०७७ को नीति कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत उक्त कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउन पहल सुरु भएको हो । ५ औँ नगरसभामा प्रस्तुत गरेको नीति, कार्यक्रम […]
बलिउड अभिनेता आमिर खान र उनकी पहिलो पत्नी रिनाको छोरी इरा खानले आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा एक भिडियो सेयर गरेकी छिन् । जसमा आफुमाथि १४ वर्षको उमेरमा शा’ रीरिक शो ‘षण भएको बताएकी छिन् । इराले भनेकी छिन्, ‘जब म १४ वर्षको थिए त्यत्तिबेला ती व्यक्तिले के गरेको आफुलाई थाहा थिएन् ।’ उनले भनेकी छिन्, एक […]
१ घण्टा भित्रमा तपाइले सोचेको सबै काम बन्नेछ, यो कुरालाई बेवास्ता नगर्नुहोला, पूरा पढेर ॐ लेखि कमेन्ट गरी शेयर गर्नुहोस्
१ दिन भित्रमा तपाइले सोचेको सबै काम बन्नेछ, यो कुरालाई बेवास्ता नगर्नुहोला, पूरा पढेर ॐ लेखि कमेन्ट गरी शेयर गर्नुहोस पाथीभरा मन्दिरमा विगत २५ वर्षदेखि पण्डित काम गर्दै आउनु भएको प. खेलमराज उप्रेतीले ठोकुवा छ कि तपाईंले सोचेको सबै कुरा १ दिन भित्रमा पूरा हुने छ । यो कुरालाई झुट नाचेर विश्वास गर्नुहोला । पत्नीको […]
इन्द्रेणीकि कल्पना दाहाल रुदै मिडियामा,मेरो जीवनको आज कालो दिन भन्दै यस्तो सम्म गरिन …(भिडियो हेर्नुस्)